iDevice တွေအတွက် app တွေရယူနိုင်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး မရှိမဖြစ် Cydia Repos(Sources) များ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Unlabelled iDevice တွေအတွက် app တွေရယူနိုင်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး မရှိမဖြစ် Cydia Repos(Sources) များ
iDevice တွေအတွက် app တွေရယူနိုင်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး မရှိမဖြစ် Cydia Repos(Sources) များ
Unknown at 2:40:00 PM
အခု iDevice တွေကို Jailbreak လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ iDevice တွေမှာ app တွေသွင်းကြပါတော့မယ်။ အဲဒီလို app တွေသွင်းဖို့အတွက် Jailbreak လုပ်ကြတာပဲလေ။ Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ iDevice တွေမှာ Cydia ဆိုတဲ့ app လေးရှိတာကို သိကြမှာပါ။ ဖုန်းကို Internet ချိတ်၊ Cydia ကိုဖွင့်ပြီး app တွေ၊ မြန်မာ စာနဲ့ Keyboard တွေထည့်ကြရတာပါ။ အဲဒီလိုထည့်မယ်ဆိုရင် Cydia မှာ Source တွေထည့်ထားမှ လိုချင်တဲ့ app တွေရမှာပါ။ အခုအောက်မှာပေးထားတဲ့ Source တွေက 2013 မှာ အကောင်းဆုံးနဲ့၊ Cydia မှာမရှိမဖြစ်ထည့်ထားရမဲ့ Source တွေပါ။ Cydia မှာ Source တွေထည့်ပုံထည့်နည်းကတော့ (မသိသေးသောသူများအတွက်)—
ဖုန်းကို Internet ချိတ်ထားပါ။ ( WiFi, Data တစ်ခုခုပေါ့)
Step 1: Open Cydia. (ဖုန်း app တွေမှာ Cydia ဆိုတဲ့ Icon လေးရှာပြီးဖွင့်ပါ)
Step 2: On the tab bar below, open Manage. (Cydia ဖွင့်လို့ပွင့်လာတဲ့ Box ထဲက အောက်ဘက်မှာ Tab Bar မှာ Sources (or) Manage ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။)
Step 3: Choose Sources. ( Sources ကိုနှိပ်ပြီးရွေးပါ)
Step 4: Tap on Edit on the upper right corner and then Add on the upper left corner. (ညာဘက် အပေါ်ဒေါင့်မှာ Edit ကိုနှိပ်ပြီး အပေါ်ဘယ်ဘက်ဒေါင့် Add ကိုနှိပ်ပေးပါ။) A little text field will pop up and this is where you'll write the repo's URL. (စာရေးမဲ့ Box လေးပေါ်လာပါမယ်။အဲဒီအကွက်လေး ထဲမှာ အခုအောက်မှာရေးပေးတဲ့ Source လိပ်စာတွေကို ရေးပြီး Add နှိပ်ပေးရမှာပါ။ ( http://apt.modmyi.com ကိုရေးပြီး Add နှိပ်ရမှာပါ)။ နှိပ်လိုက်ရင်သူဟာသူ အလုပ်လုပ်နေပါမယ်။ Back to Cydia (or) Restart Springboard ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီး အဲဒါကိုနှိပ်ရမှာပါ။ အဲဒီအဆင့်ထိပြီး ပြီဆိုရင် Sources List မှာကိုထည့်လိုက်တဲ့ အမည်နဲ့ဝင်နေပါပြီ။ ဒါဆိုအဲဒီ Source မှာရှိတဲ့ App တွေလည်းဒေါင်းလို့ရပါပြီ။ ကဲ Source တွေရဲ့ List ကတော့---
(Notable Apps / Themes / Tweaks: DreamBoard, UnFolder, AlwaysArrange, Aero, HeadphoneLauncher, SMS Timestamps, SpotSiri, Reveal, Wake With Weather, Elite PRO Theme, Boxor HD Theme, Jaku for iOS5Theme, Ayecon iOS Theme.)
(Notable Apps / Themes / Tweaks: iFile, IAP Cracker, Barrel, Springtomize 2, InfiniDock, Celeste, AirBlue Sharing, SMS+, iBlacklist, InfiniBoard, InfiniFolders, GraviBoard, GravityLockScreen.)
(Notable Apps / Themes / Tweaks: App Switcher, Cydialer, Notifier+, CallLock, Auto3G, CameraWallpaper, ChatPic, DisplayOut, FoldersInFolders. )
(Notable Apps / Themes / Tweaks: biteSMS, CleverPin, Color Profiles, NotiPad, AppFront, AnyLock, FolderEnhancer, Dashboard X, NotesEnhancer.)
(Notable Apps / Themes / Tweaks: FaceBreak, FullScreen for Safari, Gingerbread HD, YourTube HD, AppLocker, AndroidLock XT, RetinaPad.)
6. SiNful iPhone Repo
(Notable Apps / Themes / Tweaks: AdBlocker, CallBar, MultiFl0w, PkgBackup, Zephyr, 3G Unrestrictor. )
(Notable Apps / Themes / Tweaks: AppSync 4.0+/5.0+, GridLock, SleepFX. )
(Notable Apps / Themes / Tweaks: Installous 4/5 and Crackulous. )
(Notable Apps / Themes / Tweaks: Insomnia Pro, LockInfo, LockLauncher, Move2Unlock, NoSpot, SBRotator.)
http://cydia.macforus.com ဒါကတော့ iDevice တွေမှာ မြန်မာ font နဲ့ Keyboard ထည့်ဖို့အတွက်ပါ။
အပျိုကြီး July 2, 2013 at 9:47 PM
အောင် မ လေးရှင် ကူးလို့မှမရတာမစွန်ပါဘူးရှင်
သူတော်ကောင်း July 2, 2013 at 9:50 PM